08 Desambra 2020 - FJKM Québec - Canada
08 Desambra 2020
Voaporofo ny maha- Mesia an’i Jesoa
MATIO 1 : 1-17
1:1 Ny filazana ny razan’i Jesosy Kristy, zanak’i Davida, zanak’i Abrahama.
1:2 Abrahama niteraka an’i Isaka; ary i Isaka niteraka an’i Jakoba; ary i Jakoba niteraka an’i Joda mirahalahy avy;
1:3 ary i Joda niteraka an’i Fareza sy i Zara tamin’i Tamara; ary i Fareza niteraka an’i Hezrona; ary i Hezrona niteraka an’i Rama;
1:4 ary i Rama niteraka an’i Aminadaba; ary i Aminadaba niteraka an’i Nasona; ary i Nasona niteraka an’i Salmona;
1:5 ary i Salmona niteraka an’i Boaza tamin’i Rahaba; ary i Boaza niteraka an’i Obeda tamin’i Rota; ary i Obeda niteraka an’i Jese;
1:6 ary i Jese niteraka an’i Davida mpanjaka. Ary i Davida niteraka an’i Solomona tamin’ny vadin’i Oria;
1:7 ary i Solomona niteraka an’i Rehoboama; ary i Rehoboama niteraka an’i Abia; ary i Abia niteraka an’i Asa;
1:8 ary i Asa niteraka an’i Josafata; ary i Josafata niteraka an’i Jorama; ary i Jorama niteraka an’i Ozia;
1:9 ary i Ozia niteraka an’i Jotama; ary i Jotama niteraka an’i Ahaza; ary i Ahaza niteraka an’i Hezekia;
1:10 ary i Hezekia niteraka an’i Manase; ary i Manase niteraka an’i Amona; ary i Amona niteraka an’i Josia;
1:11 ary i Josia niteraka an’i Jekonia mirahalahy avy, tamin’ny nifindrana tany Babylona.
1:12 Ary taorian’ny nifindrana tany Babylona i Jekonia dia niteraka an’i Sealtiela; ary i Sealtiela niteraka an’i Zerobabela;
1:13 ary i Zerobabela niteraka an’i Abihoda; ary i Abihoda niteraka an’i Eliakima; ary i Eliakima niteraka an’i Azora;
1:14 ary i Azora niteraka an’i Zadoka; ary i Zadoka niteraka an’i Akima; ary i Akima niteraka an’i Elihoda;
1:15 ary i Elihoda niteraka an’i Eleazara; ary i Eleazara niteraka an’i Matana; ary i Matana niteraka an’i Jakoba;
1:16 ary i Jakoba niteraka an’i Josefa, vadin’i Maria; ary i Maria niteraka an’i Jesosy, Izay atao hoe Kristy.
1:17 Ary ny taranaka rehetra hatramin’i Abrahama ka hatramin’i Davida dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’i Davida ka hatramin’ny nifindrana tany Babylona dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’ny nifindrana tany Babylona ka hatramin’i Kristy dia taranaka efatra ambin’ny folo.
Misy hevitra voizin’ny mpanoratra ao ambadiky ny tetiarana toy izao . Matio manokana dia maneho ny :
1-Fahatanterahan’ny teny fikasana
Ny filazana avy hatrany fa iJesoa no « Kristy zanak’i Davida, zanak’i Abrahama » dia manoporofo mazava , fa tanteraka ao Aminy ireo teny fikasana sy faminaniana maro samihafa momba ny Mesia , izay hita ao amin’ny Testamenta Taloha . Ny maha- zanak’i Abrahama dia maneho fa iJesoa no loharanon’ny fitahiana ho an’ny firenena rehetra ambonin’ny tany (Gen 12.3) . Ny maha-zanak’i Davida dia midika fa mpanjaka ankasitrahan’Andriamanitra hanjaka mandrakizay Izy (Sal 132.11) , ary i Kristy dia manambara fa i Jesoa no fahatnterahan’ny famonjen’ Andriamanitra .
2-Fahaterahana ho an’izao tontolo izao
Anaram-behivavy dimy no hita ato amin’izao tetiarana izao ary endri-pifandraisana tsy ara-dalàna teo amin’ny fiaraha-monina avokoa no nahazoan’izy ireo zanaka (Tamara , Rahaba, Rota, vadin’i Oria, Maria ) . Asehon’i Matio eto anefa fa anisan’ny nandray anjara mivantana tamin’ny fiavian’i Jesoa Ilay Mesia izy ireo . Araka izany dia mazava fa manana anjara ao amin’i Jesoa avokoa izao tntolo izao ary Izy mihitsy aza moa no nilaza fa « tsy tonga hiantso ny marina , fa ny mpanota » (Mat 9.13) . Koa andeha isika hanatona Azy sy hanaiky hateraka indray mba handraisantsika ny famonjen’i Jesoa Mesia .
Afaka mandresy lahatra ny hafa amin’ny maha-Mesia an’i Jesoa ve ianao?